Carbide Endmill Factory - Mpanamboatra mpamatsy Carbide Endmill, mpamatsy
Taps ho an'ny multipurpose
Kitapo ho an'ny vy tsy misy fangarony
Kitapom-bolan'ny micro sy lava lava
Mill Hard End End
Azo ampiharina amin'ny fikosoham-bary kely sy lalina ho an'ny famolavolana Carbon Steels, vy vita amin'ny vy, vy mihamafy, vy vita amin'ny varahina, firaka vita amin'ny aliminioma ary ny sisa, ny fitaovan'ny hamafin'ny HRC 65⁰. fanoherana.
Efitra famaranana mahomby
Ity fitaovana ity dia azo ampiharina amin'ny fanamboarana vy tena mahomby, vy vy HRC≤48⁰. Miaraka amin'ny famolavolana sodina ny zoro helix tsy mitovy, mampiakatra ny fefy tsy miolakolaka. Mety amin'ny fikosoham-bary lalina sy malalaka. orona.
End mill ho an'ny firaka Titanium
Azo ampiharina amin'ny fanatontosana avo lenta ny firafitry ny titan'ny fiaramanidina, Alloys tahan'ny hafanana ary vy tsy miovaova. Miaraka amin'ny famolavolana sodina ny zoro helix tsy mitovy 38 ～ 41⁰, pitch tsy mitovy, pitch elika tsy mitovy, mampihena ny fihodinan'ny fikosoham-bary, ny fahombiazana avo lenta ary ny kalitaon'ny famaranana.
Ny fitaovana dia be mpampiasa amin'ny famolavolana bobongolo, ny indostrian'ny fiara sns. Azo ampiharina amin'ny famaranana semi sy famaranana ireo fitaovana mihamafy amin'ny HRC 50～68⁰. Azonao atao ny manapaka ny vy vita amin'ny hoditra mialoha, ny vy mihamafy, ny vy, ny vy fantsomina. Apetaho amin'ny axis 3 sy ny milina CNC axis 5. Ho an'ireo milina famaranana henjana avo indrindra, ny rivotra mangatsiaka tsara indrindra dia ny rivotra mifehy. Famolavolana manokana miaraka amin'ny gropy U ka hatramin'ny avo indrindra ny savaivony fototra, manatsara ny fihenjanana sy ny fanesorana ny chip, mampitombo ny fotoana ivoahan'ny famaranana.